Ewe i-iPhone iyeyona mveliso ithengiswa kakhulu ye-2017 | IPhone iindaba
Ewe i-iPhone iyeyona mveliso ithengiswa kakhulu ye-2017
Siyawuvala unyaka, unyaka obaluleke ngokwenene kwiApple. Kulungile, ezi ntsuku zokugqibela ayizizo ezona zilungileyo kwi-Apple ngokuthathela ingqalelo yonke into ebekiweyo ngokunxulumene neebhetri zezixhobo ze-iPhone ezindala, kodwa inyani kukuba i-2017 ibingunyaka olungileyo kwi-Apple. I-iPhone X, kunye ne-iPhone 8 "efikelelekayo", banetyala ku-Apple ononyaka omnandi.
Kuya kufuneka uphume phandle uye kuqonda yonke i-iPhone X esele ijikeleza. Abahlalutyi bathi nayo: I-iPhone yayiyeyona mveliso ithengisa kakhulu yetekhnoloji kunyaka we-2017. Emva kokutsiba sikunika zonke iinkcukacha zolu hlalutyo lobuchwephesha apho basibonisa khona ukuba ewe, i-iPhone ibe yeyona mveliso ithengiswayo ye-2017.
Abahlalutyi bathi Insingiselo yeGHB, iindaba zipapashwe yiUSA namhlanje, kwaye into abayithethayo kukuba ngexesha lonyaka ka-2017 baya kuba thengiswa kufutshane Iifowuni ezizizigidi ezili-223 (yayo nayiphi na imodeli kwintengiso), xa kuthelekiswa nezigidi ezingama-211 ezazithengiswe ngo-2016.
Ukuya kwi-iPhone I-Samsung Galaxy S8 kunye nezixhobo zeNqaku 8 ziyalandela, iAmazon Echo Dot, iApple Watch, kunye neNintendo switch. Ewe kufuneka utsho ukuthengisa akufikanga kwidatha yango-2015, xa iApple ikwazile ukuthengisa malunga neeyunithi ezingama-230 ezigidi (ibingunyaka wokuyilwa ngokutsha kwe-iPhone ngokusungulwa kwe-iPhone 6). Kwaye ngoku sinokulinda kuphela unyaka olandelayo we-2018, kukho amarhe amaninzi okuba I-Apple ukumilisela ukuhlaziywa kwe-iPhone SE kwaye oku kunokuba ngowona mthengisi ubalaseleyo ngokuxhomekeke kwixabiso elisungulwe ngalo. Kwaye, uyifumene i-iPhone kulo nyaka?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Ewe i-iPhone iyeyona mveliso ithengiswa kakhulu ye-2017
UFrancisco Fernandez sitsho
Ndicinga ukuba ubungalunganga kwisihloko, ithi 2016 😉
Impazamo yesihloko ngu-2017
I-iFixit Slashes Amaxabiso eKhithi zayo zokuTshintsha iBhetri ngokuphendula kwi-Apple's Move